आन्दोलित चिकित्सकहरु | चितवन पोष्ट
गृह » आन्दोलित चिकित्सकहरु
मुलुकमा अहिले बाढीपहिरोले पु¥याएको धनजनको क्षतिसम्बन्धमा पीडित पक्षलाई राहत पु¥याउन सरकारले यथासम्भव प्रयास गरिरहेको कुरा सञ्चारमाध्यमहरुमार्फत थाहा भएको छ । तर, चर्चित डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्न र माफियातन्त्रको अन्त्य गर्न माग गर्दै गत तीन सातादेखि गरिरहेको आमरण अनशनप्रति भने सरकार गम्भीर र संवेदनशील हुन सकेको छैन । अहिले मुलुकभरका चिकित्सकहरुले डा. केसीका जायज मागहरुप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सेवाहरु बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसरी देशभरका चिकित्सकहरुले आमहड्तालमा उत्रनु भनेको सरकारको लागि दुर्भाग्यपूर्ण र लज्जाजनक अवस्था हो ।
यसरी सत्य, निष्ठा, आदर्श, सुशासन, नैतिकता र इमानदारिताको कतै मृत्यु हुन लागिरहेको त होइन ? भनेर प्रश्न गर्ने समय भइसकेको छ । चिकित्सकहरु मात्र नभएर मानवअधिकारकर्मीहरु र नागरिक समाज पनि डा. केसीका जायज मागहरुप्रति नैतिक समर्थन जनाएर सडकमा उत्रिँदै सरकारलाई देशव्यापी रुपमा दबाब दिने काम भइरहेको छ । तर विडम्बना नै मान्नुपर्ने हुन्छ कि देउवा सरकार डा. गोविन्द केसीका मागहरुप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार बन्न सकेको छैन । चिकित्सा विधेयकलाई संसद्बाट पारित गर्न र डा. केसीका मागहरु पूरा गर्न कुनै गृहकार्य सरकारले गरेको पाइँदैन ।
स्मरणीय छ, हामीले गत केही दिनदेखि डा. गोविन्द केसीका जायज मागहरु पूरा गराउन आफ्ना सम्पादकीय स्तम्भमार्फत निरन्तर रुपमा घचघच्याइरहेका छौँ । तर, निदाएको नभई निदाएको बहाना गर्ने यो सरकार चाँडै ब्युँझने अवस्थामा छैन । अब देशभरिका जनता आफैँ सडकमा उत्रेर डा. गोविन्द केसीका मागहरु पूरा गराउन र उनको जीवनरक्षा गर्न सरकारलाई दबाब नदिई नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीजस्ता जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरुले अनशनरत डा. केसीलाई भेटेर सरकारको धारणा राख्ने काम तीन हप्ता बित्दा पनि पूरा हुन नसक्नु भनेको आफैँमा लज्जास्पद विषय हो । अब तीन करोड नेपाली जनताको स्वास्थ्य रक्षाका लागि अनशनरत डा. केसीका जायज मागहरु पूरा गर्ने कि माफियातन्त्रलाई मुलुकमा मौलाउन दिने भन्ने कुराको जिम्मा सरकारको काँधमा आएको छ । हेरौँ, अब सरकार चिरनिद्राबाट ब्युँझन्छ कि सुतेको अभिनय मात्र गरिरहन्छ भन्ने कुरा प्रतीक्षाको विषय बनेर रहेको छ ।
विपत्तिमा फैलाऔँ सहयोगी हातहरु